Ku Taqasuska Xisaabiyenimo
Ka caawinta ardayga doorashada tacliin sare iyo taqasus ku saleysan waxbarasho waafaqsan shaqsiyadiisa iyo rabitaan.
Taqasuska xisaabaadka wuxuu ardayga baraa xirfadaha iyo dhaqamada xisaabinta, si ay ugu fududaato qabashada howlaha la xiriira xisaabiyenimada.
Mawduucyada lagu barto taqasuska xisaabaadka waxaa ka mid ah mabaadiida xisaabinta, aragtiyada xisaabinta, diwaangalinta macaamilka ganacsi, u diyaarinta waxbixin xisaab maamulka, xisaabinta kharashka wax soo saarka, dajinta miisaaniyadda, xisaabinta canshuuraadka iyo xisaab hubin.
Arday noocee barta taqasuska xisaabiyenimo?
Jecel xisaabta ganacsiga
Haybad u leh xusuusta macluumaadka
Dulqaad u lahaan kara su’aalaha madaxdiisa
Daacadnimo iyo hufnaan lagu sifeeyay
Xisaabiyenimo waxay fursad kuu siinaysaa ka shaqaynta ganacsiyo kala duwan, ama ka shaqaynta hay’ado dowli ah iyo kuwaan aheen dowli. Culumada xisaabaadka waxay ku tilmaamaan Xisaabiyenimo taqasus baahidiisa mar walba taagan.
Taqasus Xisaabiyenimo waa jidka ugu fudud ee aad ku noqon kartid ganacsade mustaqbalka. Tirikoobkii ugu dambeeyay ee laga sameeyay nooca jinsiga barto taqasuska Xisaabiyenimo waxaa lagu soo ogaaday 58% in gabdhaha bartaa halka 42% wiilasha bartaan Xisaabiyenimo.
Hadii aad qabtid su’aal ama uu jirto wax fikir ah fadlan halkaan nagu soo gudbi.
Jaamacadda Badweynta Hindiya waxay hiigsanysaa horumarinta aqoonta ardayga ilaa heer PHD iyo waxbarasho hal abuur leh oo raacsan cilmi baaris ku saabsan sida ay bulshada u xalin lahayd dhibaatooyinka nololeed iyo mid dhaqaale.